पोखरा पुगेर ओलीले भने-कास्कीमा ९ का ९ वामपन्थी आउनुपर्छ
बन्द सडक खुले संगै रारामा पर्यटकको चहल पहल सुरु ।।
कर्णाली नदीमा एकैसाथ १ सय ११ र्याफ्टीङ्ग संचालन गरिने ।
धर्तिको स्वर्ग रारा हिउले सेताम्मे फोटो फिचर
रारा ताल प्रबेश गर्न पनि सय रुपैया शुल्क
हिमालकी रानि रारा घुम्ने सिजन सुरु
संवाददाता : रारा सञ्चार प्रकाशित मिति : ९ मंसिर २०७४, शनिबार १४:५५ प्रकाशित मिति : नोभेम्बर 25, 2017
पोखरा: नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पोखरामा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै कास्कीका सबै क्षेत्रमा वाम गठबन्धन जित्नु पर्ने बताएका छन् ।
एमाले एक्लैले महानगर जितेको स्मरण गर्दै ओलीले भने, ‘अहिले एमाले र माओवादी मिल्दा फेरि कतै विजुलो उम्किएर आयो भने लाज हुँदैन हामीलाई । कोही पनि आउनु हुँदैन । नौ का नौ वामपन्थी गठबन्धन आउनुपर्छ ।
ओलीले अघि थपे, ‘कास्कीका जनताले अब गाउँखाने कथामा जस्तै भनिदिनुपर्छ, कास्की जिल्लाको सेरोफेरो सबै हाम्रो । अन्त कहाँ कहाँ खोज्न पर्छ खोज ।’
झण्डै आधा घन्टा लामो भाषण गरेका एमाले अध्यक्ष ओलीले चुनावपछि वामपन्थी सरकार बन्ने र केरुङबाट काठमाडौंसम्म आउने रेललाई पोखरा ल्याइने बताए । उनले अघि भने, ‘अब रेल ल्याइन्छ, ल्याइन्छ । त्यो दिन धेरै टाढा छैन । ‘
एमाले अध्यक्ष ओलीले पुसपछि मुलुकमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार नरहने बताए ।
रारा सञ्चार अनलाइन नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायमा दर्ता भएको रारा सञ्चार अनलाइन मिडिया प्रा.ली द्वारा सञ्चालित आधिकारिक न्युज पोर्टल अनलाइन हो । यहि सञ्चार गृह द्वारा सञ्चालित कर्णाली अनलाइन पनी आधिकारीक न्युज पोर्टल अनलाइन हो । हामीलाई फेसबुकमा तलका लिकंबाट फ्लो गर्नुहोला ।
रारा सञ्चार अनलाइनः यहाँ
कर्णाली अनलाइनः यहाँ
#बिशेष सम्पादकिय ‘आम चुनावः लोकतन्त्र भर्सेस लोकतन्त्र !
जनतालाई देउवाको प्रश्नः तानाशाही कम्युनिष्ट शासन कि लोकतन्त्र रोज्ने ?
एमालेलाई सहयोग गरेको अाराेपमा मुगु कार्मारोङ्ग गाउँपालिकाकी निमा तामाङ घर निकाला
२५ कार्तिक २०७४, शनिबार १६:०४
ओली र दाहाल दैलेख आउदै
६ मंसिर २०७४, बुधबार ०९:४१
२३ आश्विन २०७५, मंगलवार १८:५१